राजपा-सपाको विज्ञप्ती नौटंकी : मधेशी नेताहरुकै निर्णयमा आयो स्थानीय तहको ‘लोकसेवा विज्ञापन’ « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
राजपा-सपाको विज्ञप्ती नौटंकी : मधेशी नेताहरुकै निर्णयमा आयो स्थानीय तहको ‘लोकसेवा विज्ञापन’
मधेश केन्द्रित सत्तासिन समाजवादी पार्टी र प्रदेशमा सत्तासिन अर्को मधेश केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीले स्थानीय तहको लोक सेवा विज्ञापनबारे विज्ञप्ती नौटंकी गरिरहेको भएता पनि मधेशी सांस्दहरुकै निर्णयका अधारमा उक्त विज्ञापन आएको खुलेको छ ।
संवैधानिक रुपमा देशका स्थानीय तहहरु अलगै अंग भएभपनि त्यसबारे बिज्ञापनका लागि राज्यब्यवस्था समितिमा बनेको प्रावधानमा मधेशी सांसदहरुको पनि सहमती रहेको खुलेको हो ।
लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनबारे चौतर्फी विरोध भइरहेको भएता पनि त्यस्तो गर्ने प्रावधान भने मधेशी नेताहरुकै अगुवाईमा भएको खुलेको हो । समाजिक संजालमार्फत उक्त कुराहरु खुल्न थालेको हो ।
राज्य ब्यबस्था समितिको काम , कर्तव्य र अधिकार :
हेर्नुस् तर्कहरु :
सपाको विज्ञप्ती :
राजपाको विज्ञप्ती :
यता राजपा र सपा दुवै पार्टीले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको विरोध गरिरहेको छ । आयोगले भने १/१ जना सिटमा आफूहरुले समावेशी गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । लोकसेवा आयोगले गत बुधबार निकालेको लोकसेवा विज्ञापनप्रति अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। आयोगले ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले विरोध गरेको छ। राजपाका साथै अन्य मधेशी दलका नेताले समेत लोसेवाको विज्ञापनप्रति विरोध जनाइरहेका छन्।
गत शनिबार राजपाले विज्ञप्ति निकाल्दै लोकसेवाको विज्ञापनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो। राजपाले यो विज्ञापनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा–३८ (४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम समेतलाई राज्यको हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात भएको दाबी गरेको छ।
सोही विज्ञापन र व्यवस्थामार्फत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई समेत कुण्ठित र हनन गरेको आरोपा राजपाको छ। आरक्षरणसम्बन्धी प्रतिशत निर्धारण नयाँ संघीय निजामति ऐन नआएसम्म ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३. प्रतिशत महिला, २८.प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२.प्रतिश मधेशी, ९ प्रतिशत दलित हुने व्यवस्था छ ।
तर, कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछट्टै रुपमा हिसाब गरी निकालिएको विज्ञापनबाट समावेशी कर्मचारी भर्ना प्रकिृयालाई तहस/नहस गरेको भन्दै सो विज्ञापन फिर्ता लिन राजपा नेपालले माग गरेको छ।
तर, लोकसेवा आयोगद्वारा स्थानीय तहमा निकालिएको विज्ञापन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएपछि मात्रै अगाडि बढेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिमा राजपाका दुई नेता राज किशोर यादव र राजेन्द्र महतो पनि छन् ।
लोकसेवा आयोगद्वारा स्थानीय तहमा निकालिएको विज्ञापनबारे छलफलमा मधेशका नेतहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो। राजपाका दुई नेता यादव र महतोसँगै नेपाली कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वृजेश गुप्ता र लक्ष्मी चौधरीसहित समाजवादी पार्टीका रामसहाय यादवको पनि सहभागिता थियाे। मेधशी दलका ६ जना सदस्यसहित राज्य व्यवस्था समितिमा २६ सदस्य छन्।
यसरी मधेसकेन्द्रित दलका ६ जना सांसद रहँदा रहँदै किन याे विज्ञापन पारित भयाे ? कसरी पारित भयो ? किन रोक्न सकेनन् नेताहरुले ? अहिले आएर विराेध गर्नुकाे तात्पर्य के ? मधेशका नेता किन दोहरो चरित्र प्रर्दशन गरिरहेका छन्? यी सबै प्रश्न उब्जिएका छन् यतिबेला।
यसैबीच राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले राज्य व्यवस्था समितिमा आफूहरुसँग नसोधी बहुमतले पारित भएकाे तर्क गरे। लाेकसेवा विज्ञापन पेलेरै पारित भएकाे उनले बताए।
यता राजकिशोर यादवले पनि संविधानमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको प्रति विराेध जनाए। भने, ‘आयोग र सरकारले संविधानलाई मानेको छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता अमरेशकुमार सिंहले पनि लाेकसेवाले निकालेकाे विज्ञापनमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: Jun 4, 2019